Enweela m ihe omume a iji cheta uru anọ dị na ị na-arụ ọrụ n'ịntanetị;
Pịa onyonyo a ka ibudata eReport aCommunication
Ebe nrụọrụ weebụ dị umeala n'obi bụ ntọala nke mgbasa ozi n'ịntanetị gị, nkà na ụzụ nke dị taa, nke nwere ike ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ gị, ga-enye ya ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ maka nzukọ gị na autopilot.
Ị chọrọ ka ebe nrụọrụ weebụ gị rụọ ọtụtụ ọrụ dịka o kwere mee 24 awa kwa ụbọchị n'enweghị enyemaka gị maọbụ anya gị. Naanị n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịmalite azụmahịa gị n'ọkwa ebe ọ ga-akwado gị.
Akụkụ a nke ebe nrụọrụ weebụ bụ ihe m weere dịka ozi gị, ndị a bụ isi ihe ịchọrọ ịme banyere nzukọ gị na ihe ịchọrọ ịbanye n'ụlọ ka ndị mmadụ wee ghọta echiche gị.
Ọ bụ ugbu a n'ụzọ doro anya na ịmepụta usoro nke na-arụ ọrụ site na ebe nrụọrụ weebụ gị iji mee ka ọtụtụ n'ime mmekọrịta dị n'etiti nzukọ gị na onye ọrụ. Ikekwe nke a bụ otu n'ime ihe kachasị eji weebụ eme ihe n'ihi na ọ na-ebelata ihe a chọrọ maka enyemaka mmadụ n'etiti nzukọ gị na ndị ọrụ ruo mgbe e mezuru otu ihe mgbaru ọsọ.
Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nwere ike ịdenye onwe ha, na-ahọrọ aha njirimara na paswọọdụ ha, mgbe ahụ ịnata ozi-e nkwado iji nye ha ikikere maka ịkwado ahịa ahịa e-mail. O nwekwara ike (n'enweghị nsogbu) na-enye ụlọ ọrụ ebe ndị mmadụ nwere ike ịmepụta profaịlụ na melite ihe oyiyi na ebe nrụọrụ weebụ. I nwekwara ike ịnye ohere maka ndị ọrụ iji nyefee ọdịnaya ọhụrụ maka ebe nrụọrụ weebụ ma tinye ya ozugbo n'ime usoro ahụ, ọdịnaya a agaghị apụta na weebụ ahụ ma ọ bụrụ na onye nchịkwa na-edozi ya.
Ozugbo ha nọ na listi nzipu ozi gị, ha nwere ike ịnweta ozi ịntanetị tupu oge a karịa ọnwa ma ọ bụ ọbụna afọ!
Ebe nrụọrụ weebụ bụ nnukwu ọnụ ụzọ nke nwere ike kesaa akwụkwọ na ihe oyiyi nke naanị ị ga-eme otu ugboro. Ikike nke akwụkwọ pụrụ iche nke na-edepụta ma na-eme akwụkwọ (dịka ederede akwụkwọ - PDF) bụ ụzọ dị mma nke ikwe ka ndị ọrụ na-emekọrịta ihe na nzukọ gị na iji weghachite ozi. Na nzaghachi maka adreesị ozi-e ha nyere ha ohere ịnweta ozi bara uru na-akpaghị aka.
Ogologo oge nwere ike ịfe ahịa na-abịakwute ndị ahịa nwere ike n'ihi na ole na ole ga-enwe mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ị nwere ike iji ebe nrụọrụ weebụ wepụta "atụmanya" site na "ndị na-azụ ahịa".
Ị nwere ike itinye usoro dị iche iche iji dọta ndị mmadụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi, mgbe ahụ nye ha ohere ịmekọrịta na ọdịnaya gị na naanị ịkpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị - nke a ga-azọpụta gị ọtụtụ oge na-enye gị ohere itinye ume gị na "Olileanya Ndị Na-ekpo ọkụ".
Pịa Ebe a iji budata eReport a
Nkụzi Ọzụzụ - 9 Action Steps!